Sahirana ny sekoly miahy tena: “Sekoly dimy no voatery nikatona” | NewsMada
Sahirana ny sekoly miahy tena: “Sekoly dimy no voatery nikatona”
Par Taratra sur 19/05/2020
Tsy sasatra miangavy ny fanjakana hijery ny sekoly miahy tena ny fikambanana samihafa. Samy ao anaty fahasahiranana avokoa fa mavesatra kokoa izany ho an’ny mpampianatra eny amin’ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana.
Nitohy 15 andro ny hamehana ara-pahasalamana, mbola ny kilasy manala fanadinana ihany koa no manohy fampianarana amin’izao fotoana izao. Tsy manohitra ny fanohizana ny fepetra izahay fa tsy mijery ny sekoly tsy miankina mihitsy ny fanjakana manoloana ny fahasahiranana iarahan’ny rehetra miaina, hoy ny fanambaran’ny filohan’ny fikambanan’ny rafitra laika ho an’ny fanabeazana Aile, Rakotomalala Célin, omaly. Tsy mitaky zavatra goavana izahay fa mila tohana toy ny vatsy tsinjo ho an’ny mpanabe. Ny minisitra tompon’andraikitra anefa nanantitrantitra fa mbola ho an’ny sekolim-panjakana ihany ny vatsy tsinjo hozaraina aloha hatreto, araka ny voalazany ihany. Amin’izao fotoana izao, araka ny saram-pianarana hefain’ny ray aman-dreny no handoavana ny karaman’ny mpampianatra ho an’ny sekoly miahy tena. 35% amin’ny vola tokony hiditra ihany no voarain’ny talen-tsekoly ka 35%-n’ny karama izany no azon’ny mpampianatra. Tsy afa-manoatra ny tompon-tsekoly ka vokatr’izay, sekoly dimy ny efa nampitsahatra tanteraka ny asany tao anatin’izay fihibohana izay ho an’ny Aile izay manana sekoly 400 mpikambana amin’ny faritra maro.
Mahatsapa ny mpampianatra mpikambana fa atao an-jorombala ny sekoly miahy tena nefa samy manabe zana-bahoaka avokoa.
Voalaza fa hapetraka ny fepetra rehetra iarovana ny mpianatra amin’ny tsimokaretina. Ho an’ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana, maro no tsy nandrarahana akory ny ranom-panafody, araka ny fanamarihan’ity tompon’andraikitra ity.